Matio 5: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-02 mpandimby ny Magazine > Matio 5: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra
Nampitahain'i Jesosy tamin'ny fampianarana vaovao ny fampianarana taloha. Notononiny inefatra ny fampianarana teo aloha, fa ny ankamaroany dia avy amin'ny Torah mihitsy. Enina in-enina no nanambarany fa tsy ampy. Mampiseho ny fenitra takian'ny fahamarinana izany.
Aza manamavo ny hafa
"Efa renareo fa voalaza tamin'ny ntaolo hoe:" Aza mamono olona [mpamono olona] "; fa na iza na iza mamono [vonoan'olona] dia tsy maintsy meloka amin'ny fitsarana »(and 21). Ity dia teny nalaina avy tao amin'ny Torah, izay namintinana ny lalàna sivily ihany koa. Nandre izany ny olona rehefa novakina tamin'izy ireo ny soratra masina. Tamin'ny andro talohan'ny zava-kanton'ny fanontana dia ny ankamaroan'ny olona no nandre fa tsy namaky script.
Iza no nilaza ny tenin'ny lalàna "tamin'ny ntaolo"? Andriamanitra mihitsy no teo an-tendrombohitra Sinay. Tsy niresaka fomban-drazana ratsy nataon'ny Jiosy i Jesosy. Mitanisa ny Torah izy. Avy eo izy dia mampifanohitra ny didy amin'ny fenitra henjana kokoa: "Fa lazaiko aminareo kosa: Izay tezitra amin'ny rahalahiny dia meloka." (And. 22). Angamba, araka ny Torah, dia tena niniana natao izany, saingy tsy niady hevitra tamin'izany i Jesosy. Tsy lazainy hoe iza no nanome lalana azy hampianatra. Ny zavatra ampianariny dia marina noho ny antony tsotra fa izy no miteny izany.
Tsaraina isika noho ny fahatezerantsika. Ny olona te hamono na te-hamono ny olon-kafa dia maty dia mpamono olona ao am-pony, na dia tsy afaka na tsy te hanao ny asa izy. Na izany aza tsy ny fahatezerana rehetra dia fahotana. Jesosy dia tezitra indraindray. Fa i Jesoa kosa nilaza mazava tsara: izay tezitra te hanaiky. Ny fitsipika dia apetraka amin'ny teny sarotra; tsy voatanisa ny fomban'antoka. Amin'izao fotoana izao sy amin'ny teboka hafa ao amin'ny toriteny dia hitantsika fa mamolavola tsara ny fitakiany i Jesosy. Tsy afaka mandray fanambarana avy ao amin'ny toriteny isika ary mihetsika toy ny tsy misy fitsindrampo.
Hoy koa i Jesosy: “Izay rehetra milaza amin’ny rahalahiny hoe: “Tsy tsara ianao!”, dia meloka amin’ny filankevitry ny fiderana; fa na iza na iza manao hoe: Ry adala, dia meloka amin’ny afon’ny helo” (and 22). Tsy raharaha vaovao momba ny mpitondra jiosy no tian’i Jesosy holazaina eto. Azo inoana kokoa fa manonona fehezanteny misy “tsy misy ilana azy” izay efa nampianarin’ny mpanora-dalàna izy. Manaraka izany, Jesosy dia nilaza fa ny sazy mihatra amin'ny toe-tsaina feno habibiana dia mihoatra lavitra noho ny didim-pitsarana sivily - izany amin'ny farany dia mankany amin'ny Fitsarana Farany. Jesosy mihitsy no niantso ny olona hoe “adala” (Matio 23,17, miaraka amin’io teny grika io ihany). Tsy afaka mampiasa ireo teny ireo ho fitsipika ara-dalàna harahina ara-bakiteny isika. Ny tanjona eto dia ny manazava zavatra. Ny tiana holazaina dia ny hoe tsy tokony hanao tsinontsinona ny hafa isika. Mihoatra noho ny tanjon’ny Torah io fitsipika io, satria ny tena fahamarinana no mampiavaka ny fanjakan’Andriamanitra.
Jesosy dia nanazava izany tamin'ny alàlan'ny fanoharana roa: "Noho izany, raha manolotra ny fanomezanao eo ambonin'ny alitara ianao, ary rehefa hitanao fa misy zavatra manohitra anao ny rahalahinao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanomezanao, ka mandehana aloha, mihavàna amin'ny ny rahalahinao, ary avy eo tonga sorona Jesosy dia velona tamin'ny fotoana mbola nanan-kery ny fanekena taloha ary ny fanamafisany ireo lalàna taloha dia tsy midika hoe mbola manan-kery izy ireo ankehitriny. Ny fanoharany dia manondro fa ny fifandraisana eo amin'ny samy olona dia sarobidy kokoa noho ny fahafoizan-tena. Raha misy olona manohitra anao (ara-dalàna na tsia) dia tokony handray ny dingana voalohany ilay olona iray hafa. Raha tsy manao izy dia aza miandry; mandraisa andraikitra. Mampalahelo fa tsy azo atao foana izany. Tsy manome lalàna vaovao i Jesoa fa kosa manazava ny fotokevitra amin'ny teny mazava: Miezaha hihavana.
«Ataovy haingana ny mpanohitra anao raha mbola eny an-dàlana ianao, mba tsy hatolotr'ilay mpanohitra anao amin'ny mpitsara ary hatsipy any amin'ny mpampanoa lalàna ny mpitsara ary ampidirina am-ponja ianao. Lazaiko aminao marina tokoa: tsy hiala ao ianao mandra-pandoanao ny denaria farany "(and 25-26). Ary tsy azo atao foana ny mamaha ny fifanolanana any ivelan'ny fitsarana. Tsy tokony havelantsika hiala amin'ny fanerena antsika koa ireo mpiampanga antsika. Ary tsy naminany koa i Jesosy fa tsy hahazo fahasoavana amin'ny fitsarana sivily mihitsy isika. Araka ny nolazaiko dia tsy afaka manao lalàna henjana isika amin'ny tenin'i Jesosy. Tsy manome antsika torohevitra feno fahendrena koa izy momba ny fomba hisorohana ny fonja noho ny heloka. Zava-dehibe kokoa aminy ny fitadiavana fihavanana satria izany no làlan'ny fahamarinana marina.
Aza man taua
"Efa renareo fa voalaza hoe:" Aza mijangajanga "(and 27). Andriamanitra dia nanome izany didy izany teo an-tendrombohitra Sinay. Fa hoy i Jesosy tamintsika: "Izay mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga tam-pony tao am-pony" (and. 28). Ny didy faha-10 dia nandrara ny fitsiriritana, fa ny didy faha-7 kosa tsy. Nandrara ny “fanitsakitsaham-bady” - fihetsika izay azo fehezin'ny lalàna sivily sy ny sazy. Jesosy dia tsy mikatsaka ny hanamafy ny fampianarany amin'ny alàlan'ny soratra masina. Tsy mila manao an'io izy. Izy no teny velona ary manana fahefana bebe kokoa noho ny teny voasoratra.
Ny fampianaran'i Jesosy dia manaraka tetika iray: ny lalàna taloha dia miresaka zavatra iray, fa ny tena fahamarinana dia mitaky zavatra betsaka kokoa. Jesosy dia nanao fanambarana tafahoatra mba hanasongadinana izany. Raha resaka fanitsakitsaham-bady no resahina, dia hoy izy: “Raha ny masonao ankavanana no mahatonga anao lavo, esory ary ario izy. Fa tsara ho anao raha very ny iray momba ny tenanao, ka tsy hariana any amin'ny helo ny tenanao iray manontolo. Raha manimba anao ny tananao ankavanana, tapaho izy ary ario lavitra anao. Fa tsara ho anao raha very ny iray momba ny tenanao, fa tsy ny tenanao manontolo no lasa ho any amin'ny helo. ”(And 29-30). Mazava ho azy fa tsara kokoa ny very ampahany amin'ny vatana noho ny fiainana mandrakizay. Saingy tsy tena io no safidintsika, satria ny maso sy ny tanana dia tsy afaka mitarika antsika hanota; raha esorintsika io dia hanao fahotana hafa isika. Ny ota dia avy amin'ny fo. Ny ilaintsika dia ny fiovana ao am-pontsika. Nasongadin'i Jesosy fa mila fitsaboana ny fisainantsika. Takiana ny fepetra henjana mba hanafoanana ny ota.
“Voalaza koa hoe: “Izay misaraka amin’ny vadiny dia aoka hanome azy taratasy fisaoram-bady” (and 31). Izany dia mifandray amin'ny soratra masina ao 5. Mon 24,1-4, izay manaiky ny taratasy fisaraham-panambadiana ho fomba efa niorina teo amin’ny Isiraelita. Ity lalàna ity dia tsy namela ny vehivavy manambady hanambady indray amin'ny vadiny voalohany, fa ankoatra ity toe-javatra tsy fahita firy ity dia tsy nisy fameperana. Ny lalàn’i Mosesy dia namela ny fisaraham-panambadiana, saingy tsy navelan’i Jesosy izany.
Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra misao-bady, raha tsy noho ny fanitsakitsaham-bady, dia mahatonga azy hijangajanga; ary na iza na iza manambady izay misaraka dia manitsakitsa-bady »(and. 32). Fanambarana sarotra izany - sarotra takarina ary sarotra ampiharina. Aoka hatao hoe ny lehilahy ratsy fanahy dia mandao ny vadiny tsy amin'antony. Mpanota ve avy eo? Ary fahotana ve ny manambady lehilahy hafa manambady?
Mety ho diso hevitra isika raha raisina ho lalàna tsy miova ny tenin’i Jesosy. Fa nasehon'ny Fanahy Paoly fa misy maningana hafa ara-dalàna ny fisaraham-panambadiana (1. Korintiana 7,15). Na dia fianarana ny Toriteny teo An-tendrombohitra aza izany, dia tadidio fa ny Matio 5 dia tsy ny teny farany momba ny fisaraham-panambadiana. Ny zavatra hitantsika eto dia ampahany amin'ny sary ihany.
Ny tenin'i Jesosy eto dia fanambarana manaitra iray izay te-hanao mazava tsara - amin'ity tranga ity dia midika fa ny fisaraham-panambadiana dia mifandray hatrany amin'ny ota. Andriamanitra dia nanisy fatorana mandritra ny androm-piainana eo amin'ny fanambadiana ary tokony hiezaka hitandrina azy amin'ny fomba izay nokasainy Izy. Jesosy dia tsy niezaka ny hanana resaka eto momba izay tokony hatao raha toa ka tsy mandeha araka ny tokony ho izy ireo.
“Efa renareo koa fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: “Aza mianiana tsy marina, ary tandremo ny fianiananao amin’i Jehovah” (and 33). Ireo fitsipika ireo dia ampianarina ao amin’ny soratra masina ao amin’ny Testamenta Taloha (4. Mo 30,3; 5. Mon 23,22). Fa izay navelan’ny Torah mazava tsara dia tsy nataon’i Jesosy izany: «Fa lazaiko aminareo fa aza mianiana akory, na amin’ny lanitra, fa seza fiandrianan’Andriamanitra izany; na amin’ny tany, fa fitoeran-tongony izany; mbola any Jerosalema, fa tanànan’ny mpanjaka lehibe izany” (and. 34-35). Toa navelan’ny mpitondra jiosy nianiana momba ireo zavatra ireo, angamba mba tsy hanononana ny anarana masin’Andriamanitra.
«Ary tsy tokony hianiana amin'ny lohanao ianao; fa tsy mahazo manao fotsy na mainty ny volo iray. Fa avelao ny fiteninao ho: Eny, eny; Tsia tsia. Ny any ambony dia avy amin'ny ratsy "(and. 36-37).
Tsotra ny foto-kevitra: ny fahamarinan-toetra - nohazavaina tamin'ny fomba mahagaga. Avela ihany ny fanavahana. Ny tenan’i Jesosy mihitsy no nanao mihoatra noho ny eny na tsia tsotra. Matetika izy no niteny hoe amena, amena. Nilaza izy fa ho levona ny lanitra sy ny tany, fa tsy ho levona ny teniny. Niantso an’Andriamanitra izy ho vavolombelona fa nilaza ny marina izy. Toy izany koa, i Paoly dia nampiasa fanambarana sasany tao amin’ireo taratasiny fa tsy niteny fotsiny hoe eny (Romana 1,9; 2. Korintiana 1,23).
Ka mahita indray isika fa tsy mila mieritreritra ireo fanambarana maneho ao amin'ny Toriteny eo an-tendrombohitra ho toy ny fandrarana izay tsy maintsy arahana ara-bakiteny. Tokony hanao ny marina fotsiny isika fa amin'ny toe-javatra sasany dia afaka manamafy manokana ny fahamarinan'ny zavatra lazaintsika.
Ao amin'ny fitsarana iray, mampiasa ohatra maoderina, mahazo mamela “mianiana” isika fa milaza ny marina isika ary noho izany dia afaka miantso vonjy amin'Andriamanitra. Ambony kely ny milaza fa "affidavit" azo ekena, fa ny "fianianana" tsy. Ao amin'ny fitsaràna dia mitovy amin'ny teny ireo teny ireo ary samy mihoatra ny eny ny roa.
Aza mitady valifaty
Naverin’i Jesosy indray ny teny ao amin’ny Torah: “Efa renareo fa voalaza hoe: maso solon’ny maso, nify solon’ny nify” (and 38). Indraindray dia lazaina fa io no famaliana be indrindra ao amin'ny Testamenta Taloha. Raha ny marina dia ambony indrindra izany, fa indraindray dia ambany indrindra (3. Mon 24,19- enina ambin'ny folo; 5. Mon 19,21).
Nefa noraran'i Jesosy izay takin'ny Torah: "Fa Izaho kosa milaza aminareo fa tsy tokony hanohitra ny ratsy" (and 39a). Fa i Jesosy mihitsy no nanohitra ny olona ratsy fanahy. Noroahiny hiala ny tempoly ireo mpanakalo vola. Nanohitra ny mpampianatra sandoka ireo apostoly. Niaro tena i Paul tamin'ny fiantsoana ny zony ho olom-pirenena romana hokapohin'ny miaramila. Ny tenin'i Jesosy dia fanitarana indray. Azo atao ny miaro tena amin'ny olon-dratsy. Avelan'i Jesosy handray andraikitra amin'ny ratsy fanahy isika ohatra, amin'ny alàlan'ny fanaovana tatitra amin'ny polisy.
Ny tenin'i Jesosy manaraka dia tsy maintsy jerena koa fa manitatra. Tsy midika izany fa afaka manilika azy ireo ho tsy misy ifandraisany izahay. Ao ny mahare ny fahazoana ny fitsipika; tokony avelantsika hiatrika fanamby izy ireo amin'ny fitondran-tenantsika nefa tsy hamolavola lalàm-panorenana vaovao avy amin'ireto fitsipika ireto satria noheverina fa tsy avela atao ny fanavahana.
“Raha misy mamely ny takolakao havanana, dia atolory koa ny anankiray” (and 39b). Amin’ny toe-javatra sasany, dia tsara kokoa ny miala fotsiny, toa an’i Petera2,9). Tsy ratsy koa ny miaro tena amin’ny vava toa an’i Paoly3,3). Mampianatra antsika fitsipika iray i Jesosy, fa tsy fitsipika, izay tsy maintsy arahina tsara.
“Ary raha misy olona te hiady hevitra aminao ka manala ny sisin-dambanao aminao dia avelao ho azy ireo ihany koa ny palitao. Ary raha misy manery anao handeha kilometatra iray dia mandehana miaraka amin'izy roa. Omeo izay mangataka aminao fa aza miala amin'ny te-mindrana zavatra aminao ”(and. 40-42). Raha mitaky vola 10.000 20.000 franc anao ny olona dia tsy mila omenao 10 franc izy ireo. Raha misy mangalatra ny fiaranao dia tsy mila mahafoy ny fiaranao koa ianao. Raha mangataka franc anao ny mamo iray dia tsy mila manome azy mihitsy ianao. Ao amin'ny fanambarany mihoapampana, Jesosy dia tsy miahiahy amin'ny zava-misy fa tsy tokony avelantsika hisy olon-kafa hahazo tombony amin'ny volantsika, na hanome valisoa azy ireo amin'izany. Matahotra kosa izy sao tsy hamaly faty isika. Mitandrema mba hihavanana; tsy manandrana mandratra ny hafa.
"Efa renareo fa voalaza hoe:" Tiava ny namanao "ary mankahalà ny fahavalonao» (and 43). Nandidy ny fitiavana ny Torah ary nandidy ny Isiraely hamono ny Kananita rehetra sy hanasazy ny mpanao ratsy rehetra. "Fa lazaiko aminareo kosa: tiavo ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo" (and. 44). Jesosy dia mampianatra antsika làlana hafa, fomba izay tsy miseho eo amin'izao tontolo izao. Fa maninona Inona no maodely ho an'ity fitsarana henjana ity?
"Mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra" (and. 45a). Tokony hitovy aminy isika ary tiany be ny fahavalony ka nalefany ho faty ho azy ireo ny zanany lahy. Tsy azontsika avela ho faty ho an'ny fahavalontsika ny zanatsika, saingy tokony ho tia azy ireo koa isika ary hivavaka ho azy ireo mba hotahina. Tsy afaka manaraka ny fenitra napetrak'i Jesosy ho fari-piainana isika. Saingy ny hadisoantsika miverimberina dia tsy tokony hanakana antsika tsy hanandrana ihany.
Nampahatsiahy antsika i Jesosy fa Andriamanitra dia "mampiposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina" (and. 45b). Tsara fanahy amin'ny olona rehetra izy.
«Fa raha tianao izay tia anao, inona no valim-pitia azonao? Moa tsy mba manao toy izany koa ny mpamory hetra? Ary raha tsara fanahy amin'ny rahalahinao fotsiny ianao, inona no ataonao manokana? Moa tsy manao toy izany koa ny jentilisa? " (V. 46-47). Antsoina isika hanao mihoatra ny mahazatra, mihoatra ny ataon'ny olona tsy niova fo. Ny tsy fahafahantsika tonga lafatra dia tsy manova ny antsontsika hiezaka hatrany hanatsara.
Ny fitiavantsika ny hafa dia tokony ho tonga lafatra ary hitatra amin'ny olona rehetra, izany no fikasan'i Jesosy tamin'ny nilazany hoe: "Koa amin'izany dia tokony ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny Rainareo Izay any An-danitra" (and 48).
Matio 5: Toriteny teo an-tendrombohitra (Fizarana 2)